लेडम: औषधीय गुण। खाडीबाट लेडम
जंगल को गुलाबी को आधिकारिक नाम, विश्वकोश मा संकेत दिए, गुलाबी दलदल हो। र मानिसहरूले यसलाई फरक बोलाउँछन्। प्रायः प्राय: तपाईं मार्श बेवकूफ, श्यागली, क्लोपोभनिक, gushatnik, पहेली को रूपमा यस्तो नाम सुन्न सक्नुहुन्छ।
ईश्वरमा, गुलाबी प्राय: ब्रोंकाइटिस, तपेदिक, स्त्री रोगको रोग र लिभर रोगको उपचारको लागि औषधिमा प्रयोग गरिन्छ। रूसमा, गुलाबी वनको थोडा पछि प्रयोग गर्न थाल्यो। परम्परागत औषधिले चाँडै दौडको अनुमान गर्यो। बिरुवाको उपचार गुणले तपाईंलाई बलियो खरानीबाट मुक्त गर्न अनुमति दिन्छ । आखिर, घास राम्रो आशावादी हो। यो बिरुवामा धेरै उपयोगी गुणहरू छन्: यसले दबाब कम गर्न सक्छ, डिलिमिरेसन र कमजोरी।
वनस्पति गुणहरूको विवरण
लेडम - एक सदाबहार श्रब, जुन हदरको परिवारलाई दिइएको छ। बिरुवाको उचाई लगभग दुई मीटर छ। यो केहि हद सम्म कठोर, विषाक्त अरोमा छ, केहि क्यामेरा को याद दिलाएको छ। तलको एक जंगली गुलाबी को तस्वीर हो।
रोपण को जरा सतह को नजिकै स्थित छ, र यसको बहु शाखाहरु लाल रंग को ग्रंथिलियर संग कवर गरिन्छ। ढिलाइको पातहरू तल घुमाउने किनारों संग एक लंबा आकार छ। तिनीहरूको सतह छाला छ। पत्तीको एक पक्ष चमकदार छ र गाढा हरियो रंग छ, अर्को भूरी रङको साथमा र सानो पहेंलो ग्रंथिहरू छन्।
फूलहरू सेतो हो र फ्लोरोसेन्सहरूमा एकत्रित ढाल जस्तो देखिन्छ। तिनीहरू जंगली रस्सरीको तस्वीरमा स्पष्ट देखिने देखिन्छन्। बिरुवाको फल एक लामखुट्टे बक्स हो। फूलहरू प्रायः मई-जुनमा हुन्छ र जुलाई-अगस्टबाट फल उठाउँछ।
लेडियम साइबेरिया, युरोपेली टन्ड्रा क्षेत्र र फरार पूर्वमा बढ्छ। जंगल गुलाबी बढ्छ कि माटो peaty मार्शी हुनुपर्छ। यो एक पाइन जंगल को एक झुकाव outskirts हुन सक्छ।
लेडम, जो औषधीय गुणहरु को व्यापक रूप देखि चिकित्सा प्रयोजनों को लागि उपयोग गरिन्छ, एक जहरीला पौधे हो। रूस, जर्मनी र स्वीडेन जस्ता देशहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय घाँस।
आधिकारिक औषधिमा आवेदन
माथि उल्लेखित रूपमा, लेडम, दबाइको औषधि गुण जो खाडीको लागि आशाकर्ता को रूपमा इन्फ्यूजन को प्रयोग लाई पनि एक जीवाणुरोधी प्रभाव छ।
श्रोता र तीव्र रूप, लारीन्गाइटिस, ट्रेकोइटिस र कुखुरा खाँसीमा ब्रोन्टेइटिस जस्तै रोगहरु को उपचार मा गोलीहरु, फूलहरु र फूलहरु को सुझावहरु को उत्कृष्ट उत्तेजना। स्वैप नींबू को निमोनिया र ब्रैनील अस्थमा को लागि अन्य औषधीय तैयारी संग संयोजन मा प्रयोग गरिन्छ। इन्फ्यूजनले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, मस्तिष्कको वायुमार्गबाट पतला र उत्तेजित फुलगमलाई मद्दत पुर्याउँछ, खाँसीलाई सफा गर्दछ। उसले पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया बढाउन सक्छ।
यदि तपाईं खाडीबाट खरानी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसले लामो समय सम्मको उपचारको साथ नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि गर्दैन। यद्यपि, यस अवस्थामा स्वतन्त्र प्रयोग अनावश्यक छ, किनभने यस बिरुवा जहरसंग सम्बन्धित छ। यो राम्रो छ यदि रोगीको उपचारको बेला चिकित्सकले अवलोकन गर्नेछ। घटनामा एक मरीजले भने कि उनको टाउको कताईरहेको छ भन्ने कुरा सुरू गर्दछ वा त्यो अधिक चिन्ता हुन्छ, यसलाई तुरुन्तै खाडीको लागि खरानीको प्रयोग गर्न रोक्न आवश्यक छ।
बिरुवाबाट ल्याइडिन "लिडिन" उत्पादन गर्दछ, जुन आशावादी गुणहरू छन्।
लोक चिकित्सा मा लेडम
गैर-परम्परागत औषधिमा जंगली गुलाबी को उपयोग अधिक आधिकारिक एक भन्दा बढी छ। यसको फूलहरु को कथन न केवल ठंड को उपचार गर्न को लागि प्रयोग गरिन्छ, तर यो बाट मुक्त गर्न को लागि पनि:
जठरांत्रको अवस्थाको रोग,
मुख्य कुरा विभिन्न अवसरों को उपयोग गर्नु भन्दा पहिले एक महत्त्वपूर्ण नियम भूलना छैन, जसमा मुख्य भाग लेडुम हो: औषधीय गुणहरु र संयंत्र को घनत्व को अध्ययन गर्नु पर्छ।
तिब्बत औषधिमा, तिनीहरू जिगर रोगहरूको उपचार गर्छन्। एलईडी को तेल को कटौती को चोटहरु को लागि एक सौंदर्य को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। आन्तरिक रूपमा यसलाई क्युलाइटिस र स्पाजमहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ। यो शरीर को तापमान कम गर्दछ, जीनोटीरियल सिस्टम मा भ्रामक प्रक्रियाहरु को सफा गर्दछ, मलेरिया र आंत रोगहरु को उपचार गर्दछ।
बिरुवाको उपयोगी गुणहरू बढाउनको लागि, यो घाँसको साथ मिडिया-व-स्थथ माथ हुन्छ। तिब्बतमा, भाइरस र शिशुहरूले तपेदिक रोग, लिभर रोग र भ्रामक रोगहरूको उपचार गर्छन्।
जलाउने चलनबाट धुँवाको आवाजले सुगन्धित सुत्न बढाउँछ, र पनि कीरालाई बहाउँछ।
लेडियम र बोसो (या फ्याक्स तेल) को आधारमा सिमेन्ट छाला रोग, शीतबाइट, स्वाद र कीराको काटनका लागि प्रयोग गरिन्छ। यो बिरुवा संग मलहरू अनुपवासहरूसँग उपचार गरिन्छ, उदाहरणका लागि, फ्युरेनकोलोसिससँग।
लेडमबाट ड्रप सामान्य ठंडको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, र स्नान डायथेसिस हुन्।
लेडुम खाडीको लागि खाई
भाइरस र संक्रामकहरूको लागि कच्चा माल तयार हुन र एक फार्मेसीमा किन्न सकिन्छ। यो उल्लेखनीय छ कि पर्याप्त सस्ता लेडियम फार्मेसीमा छ। घाँसको प्याकेटको मूल्य औसत 35 rubles मा छ।
खाडीबाट हाल को लागि2चम्मच जडी बूटी ले र उनलाई उबलते पानी को गिलास डालें, र तब पन्द्रह मिनेट को लागि पानी को स्नान मा गरम। त्यसपछि तपाईलाई कच्चा माल ठुलो पार्नु र कुकुर गर्नु पर्छ। यदि प्राप्त इन्फ्यूजन को मात्रा 200 मिलीलीटर भन्दा कम छ, त्यसपछि उबलिएको पानी थपिनु पर्छ। तपाईं औषधि भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ दुई दिन र ठुलो ठाउँमा सबै भन्दा राम्रो। एक तिमाही कपको इन्फ्युजन लिनुहोस् दुई दिनमा तीन पटक।
अर्को नुस्खाले जडीबुटीको चम्मच चम्मच चम्मच र आधा-दाथोमाको आधा चिसो प्रयोग गर्दछ। मिश्रण एक गिलास को गर्म पानी मा डाल दिए, पांच मिनेट को लागि उबला भयो, ठंडा र फिल्टर। टेबलपूनमा हरेक दुई घण्टा इन्फ्यूजन लिनुहोस्। औषधीय गुण र विनाशकारी पदार्थहरु को एक नेतृत्व छ। तिनीहरू तल छलफल गरिनेछ। भाइरस को स्वागत को खुराक यसको लायक नहीं हो।
अन्य क्षेत्रहरूमा अनुप्रयोग
औषधिको अलावा, लेडमले बागबग, माथ र चूहों विरुद्ध लड्न मद्दत गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, छाला ड्रेसिङको रूपमा, घाँस उपयोगी हुनेछ किनभने यसमा टिनिनहरू समावेश छन्। यो एक कडा स्वाद र विषाक्त प्रभाव को बियर को उबलने को समयमा जोडन सकिन्छ। पौधे सुँगुरमा आंत रोगहरु को उपचार गर्दछ, मधुमक्खहरु लाई मधुमक्खी को आकर्षित गर्दछ, र परिदृश्य को डिजाइन मा रचनाओं को निर्माण गर्दा सजावटी प्रभावहरु लाई पनि प्राप्त गर्दछ।
प्रयोगको लागि बिरुवा
रोपणले हानि पुऱ्याउन सक्छ। यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि, उत्कृष्ट उपचार गुणको साथमा, Contraindication को लेडम छ। मुख्यहरूलाई सूचीबद्ध गरौं।
लेडम युक्त दबाइहरु को अत्यधिक मात्रा मा विषाक्तता हुन सक्छ। यो उत्साहित राज्यमा व्यक्त गरिएको छ। विशेष गरी गम्भीर मामला मा, तंत्रिका तंत्र को अवसाद हुन सक्छ। केहि रोगीहरूले धेरै तपस्या र चक्कर महसुस गर्न सक्छन्। यस अवस्थामा, जंगली पर्सियालीको स्वागत रोक्न आवश्यक छ।
अतिरिक्त खुराकको कारण, पेट र आंत म्युकोसाको सूजन हुन सक्छ। यसले इन्टोकोलेइटिस र गस्टिस्टिसको विकासमा योगदान दिन्छ।
नेतृत्वबाट शह पनि जहरीली हुन सक्छ।
घाँस को सामाग्री संग ड्रग्स को उपयोग गर्भावस्था र जीवाणु मा हुन सक्दैन।
यो लिडियम रस्सेरी को लागी स्वीकृत गर्न को लागि छ जो अझै सम्म सोलह छैन।
अद्वितीय गुणहरू आधुनिक निवासियों द्वारा सराहना गरिन्छ। मानिसहरू जसले बिरुवाको निको पार्ने प्रभावलाई अनुभव गरेका छन्, यसको निको पार्ने शक्तिलाई जोड दिन्छ। रोगीहरूले जडी बूटीको छेउमा लडाइँमा सबैभन्दा राम्रो साधनको रूपमा जडीबुटीलाई चिन्ह लगाउँछन्। अज्ञात नाम "लेडुम" संग बिरुवाको अन्य गुणहरू अचम्म लागेन। समीक्षाहरु एलर्जी, ओस्टियोकोन्ड्रोसिस र अन्य रोगहरु मा जडी बूटी को उपयोग को प्रभावशीलता को गवाही दी।
यसैले, लेडम, जो औषधीय गुणहरु धेरै व्यापक छन्, विभिन्न रोगहरु को लागि एक प्रभावी पनी, एक उत्कृष्ट उपाय साबित गर्न सक्छन्। तर यो केवल एक योग्य चिकित्सक को सख्त निगरानी को लागी प्रयोग हुनु पर्छ। आखिर, कुनै पनि, सबै भन्दा प्रभावकारी औषधी, शरीरको लागि जहरमा परिवर्तन गर्न सक्छ।
घरमा उपचार गर्दै: एक औंला के शरीर लागि जिम्मेवार छ
प्राकृतिक चिकित्सा: सैलंडन र यसको आवेदन
घर मा व्यवहार हो। नङ च्याउ लागि लोक उपाय
हिमालय नुन स्नान: कसरी प्रयोग गर्ने? उपयोगी गुण साल्ट
आलु रस pancreatitis र cholecystitis: समीक्षा
लाभ र contraindications: संग मह Viburnum
एक समुदाय के हो? "VKontakte" मा समुदाय। विश्व समुदाय
अधिकारी मा-शुल्क बिक्री विभाग को। काम विवरण नमूना
बैंक खाता: प्रकार र विशेषताहरु। बैंक खाता कसरी खोल्न
चाँदी आयु को लेखकहरूले। रूस मा रजत आयु को साहित्य
सल्फर यौगिकहरू। यौगिकहरुमा सल्फर को ओक्सीकरण को डिग्री। सल्फर यौगिहरुको लागि सूत्रहरू
2013 मा पैसा लगानी
Anastasia Prikhodko: Discography, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
जेल "बेबी डाक्टर": अनुप्रयोगको बारेमा समीक्षा
जोडहरुको को गठिया - कारणहरू
Warcraft को विश्व मा Adamantite अयस्क